Sideen ku joojiyaa wax is daba marinta? - Mytika Speak
Meesha ay ku midoobeen Caqli iyo Dareen
Olol Mataano & Jacayl Rabaani ah
Ilaah & Ruuxi ah
Ego & Jirka
Astaamaha iyo Astaamaha
Isu-dheellitirka iyo Cawadda
Dhulka iyo Tamarta ifaysa
Dareen, Furayaal iyo Muujin
Karma, Dib-u-Celinta iyo Kordhinta
Fahamka, Kala-jiidashada iyo Calaamadaha
Maxay yihiin qaar ka mid ah jimicsiyada ololka mataanaha ee hadda uun kulmay?
Labada olol ee mataanaha ah ma noqon karaan isku jinsi?
Maxay dib u midoobi karaan ololka mataanaha ah?
Sideen ku ogaadaa ololka mataanaha runti inay jiraan?
Bogga ugu weyn / Casharrada Nolosha / Sideen ku joojiyaa wax is daba marinta?
Sideen ku joojiyaa wax is daba marinta?
3 Min Akhri
Markaad iskudayeyso inaad iska ilaaliso wax is daba marinta, qofku wuxuu ubaahanyahay inuu qiimeeyo hadii ay faa iido badan u tahay inay helaan wadadooda marka loo fiiriyo qofka kale.
Tusaale ahaan, Monique iyo Garin waxay ku nasanayaan sariirtooda iyagoo daawanaya telefishanka. Lugta Monique way xanuunsaneysay tan iyo jimicsikeedii sidaa darteed waxay weydiisatay Garin inay ka hesho cabitaan qaboojiyaha. Xaaladdan oo kale, Monique ma faragalinayso Garin iyo faa iidada ay u leedahay ka fogaanshaha xanuunka ayaa ka miisaan badan allabariga ugu yar ee Garin ay tahay inuu kaco. Maalinta xigta, Monique wuxuu dareemayaa wanaag wuxuuna ku socdaa guriga. Waxay xasuusataa inay ku qasban tahay inay xoogaa roodhi ah ka soo qaadato cashada inta ay ku wadato dukaan raashin. Monique waxay dareemeysaa caajis sidaa darteed waxay u yeertay Garin, oo ka shaqeynaya ardaaga gurigooda, waxayna u sheegtey in lugteeda wali ay dhaawacan tahay sidaa darteed wuu qaadan karaa rootida. Iyadu durba way ku xigtaa dukaanka, Garinna waa inuu ka baxaa jidkiisa si uu u joojiyo waxa uu sameynayo, u beddelo, una kaxeeyo dukaanka. Xaaladdan oo kale, Monique waxay wax ka qabaneysaa Garin maxaa yeelay waxay ka jiifsaneysaa lugteeda oo wali dhaawaceysa iyo faa iidada ay u leedahay Monique, inay caajis tahay, waa wax aad uga yar allabariga Garin.
Maxaa ka dhigaya wax isdabamarinta inay adagtahay in la joojiyo waa in dadka intiisa badani aysan ka warqabin inay sameynayaan. Qaarkood, waxaa lagu soo sara kiciyay maareynayaal waxayna u baahdeen inay noqdaan hal qaab difaac. Haddii qof uu yahay qofka kaliya ee ka tirsan qoyska oo aan wax isdaba marin, waxay u muuqdaan inay bartilmaameed koowaad u noqdaan kuwa kale.
Haddii aad rabto inaad qiimeyso naftaada ama dadka kale si aad u go'aamiso haddii ay jiraan wax isdaba marin, waxaad isku dayi kartaa layliga soo socda:
Qor magacyada dadka noloshaada qayb ka ah.
Magacooda, ku qor doorka kala duwan ee aad ka ciyaareyso noloshooda. Tusaale ahaan, waxaad qori kartaa gabadh / wiil, walaasha / walaalka, xaaskaaga, iwm.
Qiimee waxa ay aragti ahaan adiga kaa qaadaneyso ee doorkaas ah. Tusaale ahaan, sidee buu ilmahaagu kuugu arki karaa waalid ahaan? Sidee walaalkaa kuu arki karaa inaad walaalo tahay? Sidee wehelkaagu kuugu arki doonaa xaas?
Tijaabi xiriirkaaga aad la leedahay qof kasta oo ka mid ah dadka ku jira liiskaaga oo si daacadnimo ah isugu day inaad aragto cidda gacanta sare leh. Kumaa dariiqa u maraya xiriirka?
Haddii xiriirkaagu uusan ahayn mid isku dheelitiran, u gudub asalka sababta adiga ama qofka kale aad u heshaan qaabkooda. Qofka gacanta sare leh waa midka ama wax isdaba marinaya ama ku sugan meel ay ka kale wax ka maamuli karaan.
Mdabayshu marna waa caddaalad
Abaahidooda marna waa dhif iyo naadir
Nwada xaajoodyadu waxay socdaan hal waddo
Iamaano macquul ah
Persuasive tones si aad u maqashid
Uereyo aan la rabin ayaa dhagahaaga ka yeeraya
Lka jawaab celin adag
AWaxaan ka walwali doonaa waxaad rabto
Tumultuous falalkaaga ugu fiican soo bandhig
Ewaxyaalaha aad sheegto oo dhan
Tagsmiyirka shaqaynta khalkhal galiye koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo ruux ahaaneed
Sideen waalid ugu noqdaa carruur badan oo shakhsiyado kala duwan leh?
Sideen qof ugu kala qaadaa dariiqyada?
Maxay ka dhigan tahay in shay shaashaa?
Sideen uga gudbaa guuldarayste una guuleystaa guuleyste?
Sideen uga daayaa rajada iskeed ii soo rogtay?
Sideen ugu xiraa aragtida xun ee dadka kale?
Halkan guji si aad fikrad ugu dhajiso
La wadaag aragtidaada	Cancel reply
Ilaahay cayriin wuxuu leeyahay,
February 20, 2021 at 2: am 51
heterodoxbudhism wuxuu leeyahay,
March 3, 2021 at 10: 15 pm
Mytika wuxuu leeyahay,
March 4, 2021 at 9: am 05
Mahadsanid! Waan ku faraxsanahay inaan maqlo waad ka heshay. ❤️
Ma jiraa qof gaadha heer uu nolosha ku qanco?
Ego iyo Jirka
Weydii talosiinta Mytika
Ku soo biir naadiga
Noqo qofka ugu horeeya ee ogaada markaan jawaabo cusub udhajinayno su'aalahaaga ruuxiga ah.
Mytika Speak waa kheyraad loogu talagalay kuwa la kulma baraarug xagga ruuxa ah, isku imaatinka ololka mataanaha, barashada muujinta, ogaanshaha Qofnimadooda dhabta ah, iyo mowduucyo badan oo dheeri ah adoo siinaya jawaabaha su'aalaha ruuxiga ah.
Ma "Jacayl iyo Iftiin" baa farxad?
Xadgudubyadu miyey ujeeddo ka leeyihiin nolosha?
wacyiga miyir qabka ah miyirka jacaylka rabaani ah ego xagasha Ilaah haiku waxyoonay casharo muuqda gabayo yar koritaanka shakhsi ahaaneed gabay gabayo gaaban ruuxiga ah ruux ahaaneed casharo ruuxi ah Run Is Labaatan Guul
Copyright © 2022 Mytika Speak. Dhammaan xuquuq dhowran. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka